चुनावमा होम्मिए कलाकार, कुन कलाकार कुन पार्टीको प्रचारमा ? – YesKathmandu.com
चुनावमा होम्मिए कलाकार, कुन कलाकार कुन पार्टीको प्रचारमा ?
मङ्गलबार २८, कार्तिक २०७४
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर चुनावी गीत सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेर गएको छ । डिजिटल दुनियाँमा चुनाव लक्षित गीत–संगीतको बाढी नै आएको देख्न सकिन्छ । युट्यूब च्यानलमा नै यतिबेला चुनाव लक्षित गीत नै बढ्ता चल्तीमा देख्न सकिन्छ । लोकदोहोरी गीतमा प्रसिद्धि कमाएका कलाकार बद्री पंगेनीले वाम गठबन्धनको पक्षमा भोट माग्दै गीत तथा संगीत तयार पारेको छ ।
विशेषगरी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाममा नै उहाँले चुनावी गीत तयार पारेका छ । विभिन्न जिल्लाका चुनावी अभियानमा व्यस्त रहनुभएका पंगेनीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने दायित्व हामी कलाकारको पनि हो । सोही दायित्वलाई पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले वाम गठबन्धनको पक्षमा गीत गाएका हौँ ।”
खत्रीको एक गीतको बोल छ, “माओवादी केन्द्र, एमाले, मसाल देश हाँक्ने संयुक्त वामले हो, कमरेड प्रचण्ड देशका राजनेता, मिलीजुली जिताउने हाम्ले हो ।”
खानेपानी, सिँचाइ, सडक, स्वास्थ्य अनि शिक्षा, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने वाम गठबन्धन जरुरी रहेको भन्दै खत्रीले गीतमार्फत, बेरोजगारले रोजगार पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने जस्ता राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न वामपन्थीको सत्ता जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । खत्रीको उक्त गीत हालसम्म १७ हजारले युट्यूबमा हेरेका छन् ।
युट्यूबमा सो गीतले पनि राम्रो दर्शक पाएको छ । सार्वजनिक भएको सात दिनमा सो गीतले ३६ हजार दर्शक पाएको छ । गायक तारानाथ आचार्य र तारा पौडेलले ‘देशले खोजेको वाम एकता, जनताले रोजेको वाम एकता’ नामक गीत सार्वजनिक गरेका छ । सो गीतले हालसम्म ६६ हजार दर्शक पाएको छ ।
लोकगायक डिल्ली परियार र अमित परियारले पनि पूर्वमा लाली छाउँदैछ भन्ने चुनावी गीत तयार पार्नुभएको छ । सार्वजनिक भएको तीन दिनमा सो गीत १२ हजारले हेरेका छन् । वरिष्ठ लोक दोहोरी गायक पुरुषोत्तम न्यौपानेले ‘एमाले जनताको साथमा छ’ भन्ने गीतमार्फत संविधान कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सो गीतले हालसम्म एक लाख ६१ हजारले हेरेका छन् ।
लोक दोहोरी गायिका राधिका हमालले ‘काँग्रेस हो सुख र दुःखमा’ भन्ने गीत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनकै क्रममा सार्वजनिक गरिएको सो गीतले राम्रो दर्शक पाएको छ । लोक दोहोरी गायक विमलराज क्षेत्री र स्मृति शाहीले पनि काँग्रेसका लागि चुनावी गीत गाएको छ ।
यस्तै, नेतापिच्छे पनि चुनावी प्रचारका गीत बनाउने गतिविधि बढेर गएको छ । जाजरकोटमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतको नाममा चुनावी गीत बनाइएको छ । यस्तै, गोरखाबाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार प्रकाशचन्द्र दुवाडीको नाममा पनि लोकदोहोरी गायक राजु ढकालले चुनावी गीत तयार गर्नुभएको छ ।
नेपाल सांस्कृतिक संघ, रोल्पाले ‘चारतारे झण्डालाई’ भन्ने चुनावी गीत तयार पारेको छ । सो गीतले हालसम्म २० हजार दर्शक पाएको छ । त्यस्तै, लोक गायक भानुभक्त जोशीले ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विशेष’ भन्ने चुनावी गीत गाएको छ ।
लोकगायक वैकुण्ठ महत र पूर्णकला विसीले पनि ‘आयो एमाले आयो’ भन्ने गीत सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, गायक तथा संगीतकार चेतन सापकोटाले पनि चुनावी गीत गाउनुभएको छ । संगीतकारसमेत रहनुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता मणि थापा गीत–संगीतको माध्यमबाट चुनावी अभियान चलाउने विषय सकारात्मक भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभावमा पार्ने भनेकै गीत–संगीत भएकाले पछिल्लो दिनमा गीत–संगीतको मात्रा बढेको जानकारी दिनुभयो ।
युट्यूबको टेण्ड हेर्दा लोकशैलीमा गाइएका चुनावी गीतले बढ्ता दर्शक पाएका छन् । लोकशैलीमा मात्रै होइन, लोक—आधुनिक शैलीमा पनि चुनावी गीत तयार पारिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भने वाम गठबन्धनलाई विजयी गराऊँ भन्ने गीत नै युट्यूबमा बढी देखिन्छन् ।
एमाले नेता शेरधन राईमाथी बम प्रहार, अंगरक्षक घाइते
गेजुवा कम्पनीसंगको खारेजी सम्झोताबारे बाबुरामले मुख फोरे
मुग्लिन-नारायणघाट सडक भासियो, यातायात पूर्णरुपमा ठप्प
इक्यानको नेतृत्वका लागि पाण्डे नेतृत्वको प्यानल घोषणा
काठमाडौं महानगरपालिकामा रुद्र तमाङको चकचकी
हावाहुरीले रुख ढल्ला त्रिचन्द्र अगाडी तीन जना घाइते
एमाले नेता खनाल दिल्लीप्रस्थान
काम गर्न सकिँन भन्दै किन गिडगिडाउनुहुन्छ ? राजिनामा दिनोस न !
चलचित्र लम्फूमा ‘तरकारीवाली’ को अभिनय,अभिनयबाट कमाएको रकम समाजसेवामा
काठमाडौंको बानेश्वरदेखि मुम्वईको थानासम्म संविधानमा सलाई कोरियो
ओलीबाट लगातार प्रश्न बर्सिएपछि लज्जित हुँदै फर्किए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
संसद्को बैठकमा सांसद्हरुको संख्या नपुगेर स्थगित
सप्तरीमा मधेसी मोर्चाको प्रदर्शन
११ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर राजिनामा दिँदै देउवा